သင့်ရဲ့ ကျားအင်္ဂါမှာ ဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့ အဆိုးရွားဆုံး ကံကြမ္မာ ဆယ်မျိုး – Gentleman Magazine
Invaginated ဆိုတာ ကျားအင်္ဂါ အတွင်းအပြင် ပြောင်းပြန်လန်သွားတာရဲ့ ဆေးပညာအခေါ်အဝေါ်ပါ။ Google မှာ Invaginated Penis လို့တော့ ရှာမကြည့်မိဖို့ အကြံပေးပါရစေ။ သင့်ရဲ့လိင်တံကို အားတစ်ခုနဲ့ ခပ်ပြင်းပြင်း ဆောင့်မိတဲ့အခါ အထဲက ကြွက်သားအချောင်းက ခန္ဓာကိုယ်ထဲ ဝင်သွားပါတယ်။ အဲဒါမျိုးက ဖြစ်ခဲပါတယ်။ ဆိုင်ကယ်မှောက်သူတွေမှာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဖြစ်ရင်လဲ ပြန်လည်ကုသပြီးတဲ့အခါမှာ ပုံမှန်အတိုင်း လိင်ကိစ္စ ဆက်ဆံနိုင်တာကို တွေ့ရပါတယ်။
သင့်ကို အိပ်မက်ဆိုးတွေပေးမယ့် တခြားအဖြစ်အပျက် ၉ မျိုး ရှိပါသေးတယ်။
၂. Saxophone Penis
လင့်ကြောတစ်ခု ပိတ်ဆို့သွားတာ ၊ ဒါမှမဟုတ်ဘက်တီးရီးယားပိုးကြောင့် ရောင်ရမ်းတာတွေဟာ ဒီ ရှားပါးတဲ့ အခြေအနေကို ဖြစ်စေပါတယ်။ အဲဒိအခြေအနေမှာ လိင်တံက ရောင်ပြီး လိမ်သွားပါတယ်။ ဆေးတွေက အရောင်ကျအောင် လိမ်နေတာ သက်သာအောင် ကူညီပေးနိုင်တယ်။ ဆီးလဲ ပုံမှန် သွားလို့ရအောင် လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လိင်ကိစ္စကတော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
၃. Crossed Wires
မသေမသပ် ဆီးအိတ် ခွဲစိတ်ကုသတာ၊ ပရော့စတိတ်ကင်ဆာ ကုသတာတွေဟာ Fistula လို့ခေါ်တဲ့ သင့်ဆီးပြွန်နဲ့ စအို ဆက်ထားတဲ့ တစ်ရှုးကို စုတ်ပြဲသွားစေပါတယ်။ သင့်ဖင်ကနေ ဆီးတွေ တစ်စက်စက်ကျနေပြီး မစင်တွေဟာ ဆီးသွားလမ်းကြောင်းထဲနဲ့ ဆီးအိမ်ထဲ ဝင်လာမှာပါ။ ကုသလို့ရပေမယ့် ကြာရှည်ခက်ခဲမှာပါ။
ယောကျာင်္းတိုင်း ကြိုးစားကြည့်သင့်တဲ့ Sex position ငါးမျိုး
၄. Something Fishy
Candiru လို့ခေါ်တဲ့ ငါးတစ်မျိုးဟာ ရေကူးနေတဲ့ လူရဲ့ လိင်တံအဝကို ငါးတစ်ကောင်ရဲ့ ပါးဟက် ထင်ပြီး ဆူးတောင်နဲ့ ထိုးတတ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ဆူးတောင်ဟာ ထိုးမိပြီးတာနဲ့ ထီးလိုမျိုး ဆူးတွေ ဘေးကို ကားထွက်သွားပါတယ်။ ဘယ်လောက် နာမလဲဆိုတာကတော့ သိတဲ့အတိုင်းပါပဲ။
၅. Buried Alive
တကယ်လို့ လိင်အင်္ဂါထိပ် အရေပြားဖြတ်တဲ့အခါမှာ ထိပ်ပါ မှားပြီး ဖြတ်မိခဲ့ရင် အဲဒါဟာ သင့်ရဲ့ ကပ်ပယ်အိတ်နဲ့ ဆက်ရက်သားကြီး ပြန်ကြီးထွားလာနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ထိပ်ဟာ ကပ်ပယ်အိတ်မှာ တစ်ဝက် မြုပ်နေမယ့်အနေအထားပါ။ ကံကောင်းစွာနဲ့ အဲဒါက ကုသနိုင်ပါတယ်။
၆. Trouble with the curve
သင့်ရဲ့ လိင်တံထဲမှာ အလုံးအကြိတ်တစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့ရင် သင့်ဟာက ကောက်လာပြီး ထောင်မတ်လာတဲ့အခါ အရမ်းနာကျင်စေပါတယ်။ ပိုကြောက်ဖို့ကောင်းတာက US မှာ တစ်နှစ်ကို ယောက်ျား ၆သောင်း ကလေ ၁သိန်း၂သောင်း ထိ အဲ့ရောဂါနဲ့ ဆေးလာပြနေရပါတယ်။ ကုသနိုင်ပေမယ့် အလုံးစုံပြန်ကောင်းဖို့ အာမ မခံနိုင်ပါဘူး။
၇. Broken Penis
သင့်အင်္ဂါထဲမှာ အရိုးမရှိပေမယ့် သင်ထောင်မတ်လာတဲ့အခါ သွေးတွေနဲ့ ပြည့်လာတဲ့ ပြွန်လေးတွေရှိပါတယ်။ အဲဒိပြွန်လေးတွေ သင်ဆက်ဆံမှု ပြုနေတုန်း ကွေးသွားခဲ့ရင် ပေါက်သွားပြီး သင့်လိင်တံတစ်ခုလုံး သွေးနဲ့ ပြည့်သွားပြီး ဖောင်းကားလာပါတယ်။ ချက်ခြင်းမကုသရင် တစ်သက်လုံး ပုံပျက်သွားစေနိုင်ပါတယ်။
၈. Doggone it
အရက်မူးရင် သော့တွေ ပိုက်ဆံအိတ်တွေ ကျပျောက်တာ ထုံးစံလိုလိုပါ။ ဒါပေမယ့် ဒိုမီနီကန်က လူတစ်ယောက်ကတော့ အမူးပြေတဲ့အခါ သူ့ကျားအင်္ဂါ ပျောက်နေပါတယ် တဲ့။ ဘေးအိမ်က လူတွေပြောတာက သူမူးနေတုန်း ခွေးတစ်ကောင်က သူ့ကို တိုက်ခိုက်ပြီး စားပစ်လိုက်ပါတယ် တဲ့။
၉. A Permanent Gesture
လူတစ်ယောက်ဟာ သူ့ ကောင်မလေးရဲ့ နာမည်ကို သူ့အင်္ဂါပေါ်မှာ တက်တူးထိုးပြီးတော့ သုံးလဆက်တိုက် ထောင်မတ်နေပါတယ် တဲ့။ အကြောင်းကတော့ အဲဒိ တက်တူးသမားရဲ့ အပ်ဟာ အင်္ဂါထဲကို နက်နက်ဝင်သွားလို့ သွေးစီးဆင်းမှု အရမ်းမြင့်မားသွားတာပါ။ အဲဒိကောင်ကတော့ မကုတော့ဘူး၊ အဲ့အတိုင်ပဲ နေမယ် ပြောပါတယ်။
၁၀. Rough Day at Work
ဖလော်ရီဒါက လူတစ်ယောက်ဟာ သူ့ရဲ့ အင်္ဂါနဲ့ ကပ်ပယ်အိတ် ဖြတ်စက်ထဲ ပါသွားတော့ စက်ရုံကို တရားစွဲဆိုခဲ့ပါတယ်။ အဲဒိ ကော်ဇော ဘေးစွန်း မညီတဲ့အစတွေကို ဖြတ်ဖို့ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတဲ့စက်ကို Training မပေးပဲ အလုပ်လုပ်ခိုင်းတာ သူ့အင်္ဂါတွေပါ ပါကုန်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
သငျ့ရဲ့ ကြားအင်ျဂါမှာ ဖွဈပှားနိုငျတဲ့ အဆိုးရှားဆုံး ကံကွမ်မာ ဆယျမြိုး
Invaginated ဆိုတာ ကြားအင်ျဂါ အတှငျးအပွငျ ပွောငျးပွနျလနျသှားတာရဲ့ ဆေးပညာအချေါအဝျေါပါ။ Google မှာ Invaginated Penis လို့တော့ ရှာမကွညျ့မိဖို့ အကွံပေးပါရစေ။ သငျ့ရဲ့လိငျတံကို အားတဈခုနဲ့ ခပျပွငျးပွငျး ဆောငျ့မိတဲ့အခါ အထဲက ကွှကျသားအခြောငျးက ခန်ဓာကိုယျထဲ ဝငျသှားပါတယျ။ အဲဒါမြိုးက ဖွဈခဲပါတယျ။ ဆိုငျကယျမှောကျသူတှမှော ဖွဈတတျပါတယျ။ ဖွဈရငျလဲ ပွနျလညျကုသပွီးတဲ့အခါမှာ ပုံမှနျအတိုငျး လိငျကိစ်စ ဆကျဆံနိုငျတာကို တှရေ့ပါတယျ။
သငျ့ကို အိပျမကျဆိုးတှပေေးမယျ့ တခွားအဖွဈအပကျြ ၉ မြိုး ရှိပါသေးတယျ။
လငျ့ကွောတဈခု ပိတျဆို့သှားတာ ၊ ဒါမှမဟုတျဘကျတီးရီးယားပိုးကွောငျ့ ရောငျရမျးတာတှဟော ဒီ ရှားပါးတဲ့ အခွအေနကေို ဖွဈစပေါတယျ။ အဲဒိအခွအေနမှော လိငျတံက ရောငျပွီး လိမျသှားပါတယျ။ ဆေးတှကေ အရောငျကအြောငျ လိမျနတော သကျသာအောငျ ကူညီပေးနိုငျတယျ။ ဆီးလဲ ပုံမှနျ သှားလို့ရအောငျ လုပျနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ လိငျကိစ်စကတော့ မဖွဈနိုငျပါဘူး။
မသမေသပျ ဆီးအိတျ ခှဲစိတျကုသတာ၊ ပရော့စတိတျကငျဆာ ကုသတာတှဟော Fistula လို့ချေါတဲ့ သငျ့ဆီးပွှနျနဲ့ စအို ဆကျထားတဲ့ တဈရှုးကို စုတျပွဲသှားစပေါတယျ။ သငျ့ဖငျကနေ ဆီးတှေ တဈစကျစကျကနြပွေီး မစငျတှဟော ဆီးသှားလမျးကွောငျးထဲနဲ့ ဆီးအိမျထဲ ဝငျလာမှာပါ။ ကုသလို့ရပမေယျ့ ကွာရှညျခကျခဲမှာပါ။
ယောကြာင်္းတိုငျး ကွိုးစားကွညျ့သငျ့တဲ့ Sex position ငါးမြိုး
Candiru လို့ချေါတဲ့ ငါးတဈမြိုးဟာ ရကေူးနတေဲ့ လူရဲ့ လိငျတံအဝကို ငါးတဈကောငျရဲ့ ပါးဟကျ ထငျပွီး ဆူးတောငျနဲ့ ထိုးတတျပါတယျ။ သူ့ရဲ့ ဆူးတောငျဟာ ထိုးမိပွီးတာနဲ့ ထီးလိုမြိုး ဆူးတှေ ဘေးကို ကားထှကျသှားပါတယျ။ ဘယျလောကျ နာမလဲဆိုတာကတော့ သိတဲ့အတိုငျးပါပဲ။
တကယျလို့ လိငျအင်ျဂါထိပျ အရပွေားဖွတျတဲ့အခါမှာ ထိပျပါ မှားပွီး ဖွတျမိခဲ့ရငျ အဲဒါဟာ သငျ့ရဲ့ ကပျပယျအိတျနဲ့ ဆကျရကျသားကွီး ပွနျကွီးထှားလာနိုငျပါတယျ။ သငျ့ရဲ့ထိပျဟာ ကပျပယျအိတျမှာ တဈဝကျ မွုပျနမေယျ့အနအေထားပါ။ ကံကောငျးစှာနဲ့ အဲဒါက ကုသနိုငျပါတယျ။
သငျ့ရဲ့ လိငျတံထဲမှာ အလုံးအကွိတျတဈခု ဖွဈလာခဲ့ရငျ သငျ့ဟာက ကောကျလာပွီး ထောငျမတျလာတဲ့အခါ အရမျးနာကငျြစပေါတယျ။ ပိုကွောကျဖို့ကောငျးတာက US မှာ တဈနှဈကို ယောကျြား ၆သောငျး ကလေ ၁သိနျး၂သောငျး ထိ အဲ့ရောဂါနဲ့ ဆေးလာပွနရေပါတယျ။ ကုသနိုငျပမေယျ့ အလုံးစုံပွနျကောငျးဖို့ အာမ မခံနိုငျပါဘူး။
သငျ့အင်ျဂါထဲမှာ အရိုးမရှိပမေယျ့ သငျထောငျမတျလာတဲ့အခါ သှေးတှနေဲ့ ပွညျ့လာတဲ့ ပွှနျလေးတှရှေိပါတယျ။ အဲဒိပွှနျလေးတှေ သငျဆကျဆံမှု ပွုနတေုနျး ကှေးသှားခဲ့ရငျ ပေါကျသှားပွီး သငျ့လိငျတံတဈခုလုံး သှေးနဲ့ ပွညျ့သှားပွီး ဖောငျးကားလာပါတယျ။ ခကျြခွငျးမကုသရငျ တဈသကျလုံး ပုံပကျြသှားစနေိုငျပါတယျ။
အရကျမူးရငျ သော့တှေ ပိုကျဆံအိတျတှေ ကပြောကျတာ ထုံးစံလိုလိုပါ။ ဒါပမေယျ့ ဒိုမီနီကနျက လူတဈယောကျကတော့ အမူးပွတေဲ့အခါ သူ့ကြားအင်ျဂါ ပြောကျနပေါတယျ တဲ့။ ဘေးအိမျက လူတှပွေောတာက သူမူးနတေုနျး ခှေးတဈကောငျက သူ့ကို တိုကျခိုကျပွီး စားပဈလိုကျပါတယျ တဲ့။
လူတဈယောကျဟာ သူ့ ကောငျမလေးရဲ့ နာမညျကို သူ့အင်ျဂါပျေါမှာ တကျတူးထိုးပွီးတော့ သုံးလဆကျတိုကျ ထောငျမတျနပေါတယျ တဲ့။ အကွောငျးကတော့ အဲဒိ တကျတူးသမားရဲ့ အပျဟာ အင်ျဂါထဲကို နကျနကျဝငျသှားလို့ သှေးစီးဆငျးမှု အရမျးမွငျ့မားသှားတာပါ။ အဲဒိကောငျကတော့ မကုတော့ဘူး၊ အဲ့အတိုငျပဲ နမေယျ ပွောပါတယျ။
ဖလျောရီဒါက လူတဈယောကျဟာ သူ့ရဲ့ အင်ျဂါနဲ့ ကပျပယျအိတျ ဖွတျစကျထဲ ပါသှားတော့ စကျရုံကို တရားစှဲဆိုခဲ့ပါတယျ။ အဲဒိ ကျောဇော ဘေးစှနျး မညီတဲ့အစတှကေို ဖွတျဖို့ ဒီဇိုငျးထုတျထားတဲ့စကျကို Training မပေးပဲ အလုပျလုပျခိုငျးတာ သူ့အင်ျဂါတှပေါ ပါကုနျတယျလို့ ပွောပါတယျ။
Previous: ဘ၀မှာ ဘာတွေကိုဦးစားပေးမလဲ
Next: လုပ်ငန်းရှင် မလုပ်ခင် ဖြေနိုင်ရမယ့် မေးခွန်း ခြောက်ခု